राजेन्द्र फुयाल, आश्विन १०, २०७४
सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारी आवास, सवारी साधन र जम्बो सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश प्रमुखले मासिक ६४ हजार पारिश्रमिक, ४० हजार अतिथि सत्कार खर्च र वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउने उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले गर्नेछ ।
सरकार र चिकित्सकबीचको द्वन्द्वले मारमा बिरामी
अतुल मिश्र, आश्विन ९, २०७४
सरकार र चिकित्सकबीचको टकरावले मुलुकभरका बिरामी मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकहरू शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् ।
महागुरु फाल्गुनन्दले समाज पछि पर्नु र अशान्ति फैलिनुको मुख्य कारण मद्यपान, फजुल खर्च र अनावश्यक ढर्रा नै हो भनी पहिचान गरे ।
सुवासचन्द्र नेम्बाङ, आश्विन ९, २०७४
तस्बिर: दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर ।
दुर्गालाल केसी, दाङ, आश्विन ९, २०७४
प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्न ओमानका ११ मन्त्री बिमानस्थल जाने
होम कार्की, आश्विन ९, २०७४
ओमन सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चार दिने भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्न मस्कट अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिई सम्मान गर्ने निर्णय ओमनले गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीचको वार्ता निष्कर्षविहिन, आन्दोलन जारी रहने
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेन । चिकित्सक संघका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी र स्वास्थ्य सचिवलगायतका पदाधिकारीबीच लगभग दुई घण्टा वार्ता भए पनि चिकित्सकहरुको मागमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहमत हुन नसक्दा आजको वार्ता पनि निष्कर्षविहिन भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
दलीय स्थार्थमा शिक्षा ऐन संशोधन : अाेली
मकर श्रेष्ठ, आश्विन ९, २०७४
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्दा पनि दलीय स्वार्थले शिक्षा ऐन आठौ संशोधन भएको बताएका छन् । ऐन संशोधनको बिरोधमा ओली निवास बालकोट पुगेका विद्यार्थीहरुलाई सत्यको पक्षमा भन्दा पनि दलीय स्वार्थमा सांसदहरु समेत लागेको बताए । पूरा पढ्नुहोस्
डा. केसीले सुरु गरे १२ औं अामरण अनशन
मेडिकल शिक्षाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले माफियामूखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेको आरोप लगाउँदै विभिन्न मागसहित सोमवार १२ औं आमरण अनशन शुरू गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
पवन यादव, आश्विन ९, २०७४
पवन यादव, आश्विन ८, २०७४
श्यामसुन्दर शशि, आश्विन ८, २०७४
राजेश मिश्र, आश्विन ८, २०७४
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित
राजेन्द्र फुयाल, आश्विन ९, २०७४
सर्वसाधारणमा सर्वाधिक एवं प्रत्यक्ष सरोकार रहने मुलुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । संसदले सोमबार मुलुकी देवानीसंहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि विधेयक पारित गरी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुन निर्माणको काम पूरा गरेको छ । यसले १ सय ६४ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको दक्षिण एसियाकै पुरानो कानुनी प्रणाली अद्यावधिक गरेको छ ।
अव जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मैथिली भाषामा सपथ
पहिरोले बन्द बेनी–जोमसोम सडक सातादिन पछि खुल्यो
ईच्छापत्रको प्रावधान हटाएर देवयानी विधेयक पारित
पहिरोले रिडी–तम्घास सडक अवरुद्ध
माधव अर्याल, आश्विन ७, २०७४
सन्तोष सिंह, आश्विन ४, २०७४
शंकर आचार्य, अमन कोइराला, शिव पुरीआश्विन २, २०७४
१२ करोडको अंगुरखेती
-सुरज कुँवर, आश्विन २, २०७४
विद्या राई, आश्विन १, २०७४
तीनै दिदीभाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी
विद्या राई, भाद्र ३०, २०७४
सम्पादकीय, आश्विन ९, २०७४
सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंलाई उल्लासपूर्वक मनाउन अधिकांश नेपालीले सुरसार गर्न थाल्दा हुम्ला जिल्लाका बासिन्दालाई भने चामल जुटाउने चिन्ताले पिरोल्छ । चाडपर्वमा दुई छाक भए पनि चामलको भात परिवारलाई खुवाउने रहरले उनीहरू भौंतारिन थाल्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
हरि रोका, आश्विन ९, २०७४
हालसालै तीन ठूला पार्टीमध्ये एकका तेस्रो पंक्तिका एकजना होनहार युवा नेतासँग भेट गर्ने अवसर मिल्यो । सामान्य भलाकुसारीपछि उनलाई कुनै जोखाना नहेरी मैले सोधेंँ, ‘निर्वाचनमा उठ्ने होला नि ?’ पूरा पढ्नुहोस्
साधना प्रतीक्षा, आश्विन ९, २०७४
नारीवाद पश्चिमको उपज हुनाले नारी अस्तित्वको खोजीलाई पनि पश्चिमी भूमिकै देन मानेर हामी आºनो पछौटेपनको जिम्मेवार पूर्वीय धर्म–संस्कृति तथा त्यसबाट प्रेरित जीवन पद्धतिलाई मान्दै आइरहेका छौँ । पूरा पढ्नुहोस्
लेखनाथ पाण्डे, आश्विन ९, २०७४
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा न्युयोर्कमा अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा बञ्चित हुनुपरेको घटनाले नेपाली कूटनीतिक वृत्त तातेको छ । नतातोस् पनि किन ? पूरा पढ्नुहोस्
महिला विकासमा तगारो
मधु शाही, आश्विन ९, २०७४
‘ओनसरी त हामीभन्दा बच्चै हुन्’, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई लक्षित गर्दै भनिन् । त्यसपछि बोल्ने पालो सभामुख ओनसरीकै थियो । शालीन भावमा सभामुखले खुल्न नसकेको मुस्कान छर्दै सानो उमेरको भार खुलाइन् । ‘उमेर काँचै छ । पूरा पढ्नुहोस्
रुद्र शर्मा, आश्विन ९, २०७४
संघीय संरचना अनुसार सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत व्यवस्था भएको छ । तर उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे केही अस्पष्टता देखिन्छ । संविधानमा संघीय कार्यपालिका र संघीय व्यवस्थापिकाका साथसाथै प्रदेश कार्यपालिका र प्रदेश व्यवस्थापिका व्यवस्था भए पनि प्रदेश न्यायपालिकाको व्यवस्था छैन । पूरा पढ्नुहोस्
डा. गोविन्द केसी, आश्विन ८, २०७४
केही दिनअगाडि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको दोस्रो वर्षगाँठ मनाइयो । संसारभरको अनुभव के भन्छ भने कम्तीमा पनि सुरुका केही वर्ष वा दशकसम्म त्यस्ता दिवस उल्लासमय रूपमा मनाइन्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
सम्पादकीय, आश्विन ८, २०७४
नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको एउटा प्रयासमा फेरि निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको दबाब र प्रभावमा चलखेल सुरु भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
बाढी पीडित अनाथलाई यायोक्लाको सहयोग
किसन राई, आश्विन ८, २०७४
बाढी पीडित अनाथ दिदी–भाइ कमला र निशान राईलाई किरात राई बान्तावा यायोक्ला खिम हङकङले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । नेपाल जान लागेकी संस्थाकी उपाध्यक्ष माया राईलाई अध्यक्ष तिलक वालाहाङ राईले ४ लाख ६३ हजार २ सय सहयोग हस्तान्तरणको लागि दिएका छन् ।
ओमनमा खाडीका राजदूतहरुको सम्मेलन
होम कार्की, आश्विन ८, २०७४
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षाको विषयमा नेपाली दूतावासहरुका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ओमनमा मंगलबार खाडी राजदूतहरुको सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
नेपाली फुटबलरलाई अवसर खोजिँदै
नवीन पोखरेल, आश्विन ८, २०७४
इङल्यान्डको द फुटबल एसोसिएसन (एफए) ले बेलायतस्थित नेपाली खेलाडीका विकास र उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
भूपू गोर्खाका लागि समान पेन्सनलगायतका १३ सिफारिस
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ६, २०७४
भूपू गोर्खाहरुका माग सम्वोधन गर्न गठित प्राविधिक समितिले विभिन्न १३ सिफारिससहित आफ्नो प्रतिवेदन बेलायत सरकारसमक्ष बुझाएको छ । नेपाल सरकार एवं भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विभिन्न सिफारिससहित बेलायत र नेपाल सरकारलाई भूपू गोर्खाका माग र ऐतिहासिक गुनासा सम्वोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
'बेलायत नेपालको विकासमा भरपर्दो साझेदार'
बेलायती विदेश मन्त्रालय (एफसीओ) का निर्देशक ओएन जेन्किन्सले नेपालको विकास प्रयासमा ब्रिटेन एक भरपर्दो साझेदार रहेको बताएका छन् । उनले ब्रिटेन तथा नेपालबीच कायम रहेको दुई शताब्दी पुरानो मित्रता आगामी दिनमा अरु सुदृढ हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
समलिङ्गी विवाहमा नेपालीको दुईमत
नारायण खड्का, आश्विन ६, २०७४
समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने वा नदिने बिषयमा अष्ट्रेलियामा राष्ट्रिय रुपमा मतदान सुरु भएसँगै यहाँका नेपालीहरुमा दुईमत देखिएको छ । लामो समयदेखि विवादको रुपमा रहेको यस बिषयलाई अष्ट्रेलियाले हुलाक भोट मार्फत जनताबाट मत संकलन गर्न थालेको छ ।
एनआरएनए कोरियाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षबाट उजुरी दर्ता
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ५, २०७४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोरियाको गत सेप्टेम्बर १० तारिख सोलमा सम्पन्न छैटौं अधिवेशनको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै हारेका प्यानलले सामूहिकरुपमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
खाडीका नेपाली दूतावासहरुले संविधान दिवस मनाए
खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी संबिधान दिवस मनाएका छन् ।
स्पोर्ट्स क्लबद्वारा आयोजित ‘हङकङ नेपाल स्नुकर च्याम्पियनसिप २०१७’ को उपाधि दीपेन रानाले शनिबार जितेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
एएफपी, आश्विन ९, २०७४
ब्राइटन एन्ड होभले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार राति न्युकासल युनाइटेडलाई १–० ले हराएको छ । घरमा ब्राइटनको यो लगातार दोस्रो लिग जित हो । पूरा पढ्नुहोस्
मोइन अलीले ५३ बलमा शतक बनाएपछि इंग्ल्यान्डले तेस्रो वान डेमा वेस्ट इन्डिजलाई आइतबार राति १ सय २४ रनले हराएको छ । अलीले एक समय १४ बलमा ६१ रन बनाए । पूरा पढ्नुहोस्
राजु घिसिङ, आश्विन ९, २०७४
भिसा पाएकै दिन जापान प्रस्थान गरेको नेपाली टिमले विश्व र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिपका लागि योसिनो नदीमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ, जहाँ च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदै छ । पूरा पढ्नुहोस्
हल्चोक मैदानमा आइतबार नेपालका दर्शन गुरुङ (नीलो) प्यालेस्टाइनविरुद्ध बल अगाडि बढाउने प्रयासमा ।तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
सुबास हुमागाईं, आश्विन ९, २०७४
सुरुआती दुवै खेलमा पराजित प्यालेस्टाइनसँग नेपालले आइतबार आशातीत सुरुआत गर्‍यो । बलमा राम्रो पकड बनाउँदै लगातार आक्रमण बुनेको नेपालले १० मिनेटमै अग्रता लियो । पूरा पढ्नुहोस्
साफ यू–१८ च्याम्पियनसिपअन्तर्गत तेस्रो खेलमा नेपालले सोमबार बंगलादेशको सामना गर्दै छ । पहिलो खेलमा आयोजक भुटानसँग १–० ले पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा माल्दिभ्समाथि २–० को विजय नतिजा निकालेको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
डिसेम्बरमा हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटका लागि खेलाडीको वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस अनुसार सनसनी युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने ‘ए’ श्रेणीमा छैनन् । पूरा पढ्नुहोस्
नेपालका नम्बर एक रत्नजित तामाङ प्रथम देवीनगर ब्याडमिन्टन कपमा च्याम्पियन भएका छन् । मेन्स सिंगलको फाइनलमा रत्नजितले दिपेश धामीलाई १९…–२१, २१–११, २१–१३ ले पराजित गरेका हन् । पूरा पढ्नुहोस्
भारतबाटै ६ अर्बको खसीबोका
राजु चौधरी, आश्विन ९, २०७४
मुलुकभित्र बर्सेनि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको खसीबोका खपत हुने गरेको पाइएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरि १ करोड १० लाख खसीबोका, पाडी, बाख्रा छन् ।
एनआईसीको नयाँ घरकर्जा योजना
एनआईसी एसिया बैंकले दसैं, तिहार तथा छठको अवसर पारेर नयाँ घर कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले ‘एनआईसी एसिया बैंकको दसैं–तिहार उपहार, घर कर्जामा छुटैछुटको बहार’ नामक योजना ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
७ अर्ब जोखिममा
-सुरज कुँवर, आश्विन ९, २०७४
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले निमित्त सचिव भएको मौकामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरणपत्र लेख्न ‘नजान्दा’ कालोसूचीमा परेको स्पेनिस कम्पनी सानजोसेलाईलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने देखिन आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षाको विषयमा नेपाली दूतावासहरूका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले ओमनमा मंगलबार खाडी राजदूतहरूको सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
ठाकुरसिंह थारू, आश्विन ९, २०७४
राप्ती सोनारी गाउँपालिका महिलाको सहकारी संघले दसैंका लागि तीन हजार खसीबोका संकलन गरी बिक्री सुरु गरेको छ । काठमाडौं र पोखराका व्यवसायीले संघको खसीबोका खरिद गरेका हुन् ।
नवीन पौडेल, आश्विन ९, २०७४
यहाँका किसानका खसीबोकाको किनबेच सहकारीबाट हुने गरेको छ । बिचौलियाका कारण खसीबोकाले बजार मूल्य नपाएपछि किसानले सहकारीमार्फत बिक्री वितरण सुरु गरेका हुन् ।
विमानस्थल निर्माणमा सरकार उदासीन : सांसद
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका समितिहरूको बैठकमा मन्त्री नै अनुपस्थित हुँदा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने सांसदहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, विकास समितिलगायतले विभिन्न आयोजनाका बारेमा बुझ्नका लागि बोलाउँदा सरकारका मन्त्री र सचिवहरूले नै अटेर गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतका समितिहरुको बैठकमा मन्त्री नै अनुपस्थित हुदा विकास आयोजनाहरु प्रभावित हुने सांसदहरुले बताएका छन् ।
लोक गायिका कोमल ओली एमालेमा - ०७:०२ PMअव जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मैथिली भाषामा सपथ - ०६:३८ PMप्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्न ओमानका ११ मन्त्री बिमानस्थल जाने - ०५:३१ PMडोटीका रानाभाट बने लिगलिगे राजा - ०४:५० PMप्रत्येक वडामा एक वर्षभित्र इन्टरनेट पुर्‍याउन संसदीय समितिको निर्देशन - ०४:३९ PMपहिरोले बन्द बेनी–जोमसोम सडक सातादिन पछि खुल्यो - ०४:३० PMस्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीचको वार्ता निष्कर्षविहिन, आन्दोलन जारी रहने - ०४:२२ PM
‘खुसी र उल्लासको मानक नै बजार भयो’ अमेरिकी सहयोगले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश दिएको छ : अर्थमन्त्री कार्कीसंविधानमा कसैको विमति छैन : सुवासचन्द्र नेम्वाङतातोपानी नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष हतारिएका छन् : महरा
‘गरिबलाई चाडपर्व पहाड’
‘कमाउन सक्नेलाई सधैं चाडपर्व, हामी जस्तालाई दसैं पनि छिटो आएजस्तो हुन्छ,’ स्याङ्जा घर भई पोखराको नदीपुर बस्दै आएकी ३८ वर्षीया पूर्णकुमारी भुजेल भन्छिन्, ‘चाडपर्व खर्चको पहाड हो, धेरै दिनका लागि बोझ थपेर जान्छ ।’ दसैंले पोखराको बजार क्षेत्रलाई छोपिसकेको छ । पर्वलक्षित व्यापार मेला र किनमेल सुरु भएको छ ।
अधिकारकर्मीलाई नै बोक्सी आरोपमा यातना ‘मुलुक समाजवाद उन्मुख’ स्वास्थ्य बिमामा न्यून सहभागिता महँगो भाडा लिन टिकट बन्द
केही साताको अवधिमा फिल्म ‘मेला’ ले दोस्रो पार्टी सङ सार्वजनिक गरेको थियो । दसैंको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको गीतले मदिराको गिलास रित्तिँदाको चर्चा गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
दसैंको शुभकामना दिने चलन अचेल अलि फेरिएको छ । यो फोनबाट फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालका इनबक्समा सरेको छ । दुर्गा भजन वा अरू केही युटयुबबाट डाउनलोड गर्‍यो अनि आफन्तलाई पठायो । प्रविधिको सुविधा । पूरा पढ्नुहोस्
बर्सेनि मिस नेपालको आयोजना गर्दै आएको द हिडन ट्रेजरले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको मिस नेपाल युनिभर्सका लागि नगमा श्रेष्ठ छानिएकी छन् । संस्थाको २२ औं तथा मिस नेपाल आयोजनाको २३ आंै वार्षिकोत्सवका अवसरमा राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
काँकडभिट्टामा मञ्चित ‘रेमिटल्यान्ड’ को अर्को दृश्य । तस्बिर : पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर
श्याम सिंघकको उपन्यास ‘रेमिटल्यान्ड’ लाई झापाका रंगकर्मीहरूले नाटकको रूप दिएका छन् । परिवर्तन थिएटरका कलाकारहरूले सीमा सहर काँकडभिट्टामा त्यसको मञ्चन गरे । पूरा पढ्नुहोस्
यलमाया क्लासिकको १३६ औं शृंखलामा गायिका आशा थापा प्रस्तुत भएकी छन् । उनले राग मारु विहागमा बडा ख्याल, छोटा ख्याल प्रस्तुत गरिन् भने राग पहाडीमा आधारित ठुमरी पनि सुनाइन् । पूरा पढ्नुहोस्
सुरुचि मिसेस नेपाल
सुरुचि पाण्डेले यस वर्षकी मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल भएकी छन् । राजधानीमा सम्पन्न प्रतियोगितामा उनले ३८ प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेकी हुन् । मस्ट टयालेन्ट र बेस्ट क्याटवाकको उपाधिसमेत जितेकी सुरुचिले अमेरिकामा हुने मिसेस इन्टरनेसनल २०१७ मा पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । पूरा पढ्नुहोस्
रुबी बनिन् मिस पूर्वाञ्चल
तस्बिर: प्रदीप मेन्याङ्बो
मिस पूर्वाञ्चलको उपाधि धरानकी रुबी लिम्बूले जितिन् । शुक्रबार अबेर राति धरान सभागृहमा सम्पन्न प्रतियोगितामा उनले १९ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मिस इन्टेलेक्चुअल, मिस टयालेन्ट, मिस हेल्दी होम टाइटलसहित उपाधिमाथि कव्जा जमाएकी हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ७, २०७४
१ । टाइटनिकसन् १९९७फरक वर्गका केटाकेटीको सदाबहार प्रेमकथा हो यो । जेम्स क्यामरुन निर्देशित यस फिल्ममा लियोनार्डो डिकाप्रियोलाई गरिब आर्टिस्ट र केट विन्स्लेटलाई सम्पन्न केटीको भूमिकामा देख्न पाइन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
एक अध्ययनले महिलाको मस्तिष्क पुरुषको भन्दा बढी सक्रिय हुने बताएको छ । महिला मस्तिष्क मुख्य रूपले आवेग नियन्त्रण, ध्यान केन्द्रित, भाव र तनावको क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुने बताइएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
दसैंमा खानपानडिप्रेसनको औषधि बन्न सक्छ खतराऔंलाको नङबाट पनि थाहा हुन्छ 'रोग'बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको ‘फर्मूला दूध’ खुल्लम खुला बिक्री
आङछिरिङ शेर्पा, आश्विन ८, २०७४
विश्वमा जहाँसुकै सबैले सजिलै चिन्ने नेपाली समुदाय हो, शेर्पा । नामको पछाडी शेर्पा जोडिएको देखेपछि पर्वतारोहणमा उनीहरुले देखाएको आदम्य सहासको विषय चर्चा हुने गर्दछ । पूरा पढ्नुहोस्
सरकार, चिकित्सकको मनोबल कति गिराउने ?रोहिंग्या समस्या समाधानमा अपेक्षित भारत, चीन र सुकीको भूमिका कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि हजारे अभियानजिते एनआरएन, हारे पलायन
आन्दोलन १०० दिनमाः गोर्खाल्यान्डप्रति सरकारको बेवास्ता
पर्वत पोर्तेल, आश्विन ९, २०७४
पश्चिम बंगालको पर्यटकीय सहर दार्जिलिङमा अलग प्रान्त ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग गर्दै गरिएको आन्दोलनले सय दिन नाघेको छ । यो अवधिमा आन्दोलनले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । पूरा पढ्नुहोस्
ट्रम्पले किमलाई ‘बाँकी नराख्ने’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र विदेशमन्त्री रि योङ होलाई ‘लामो समय बाँकी नराख्ने’ चेतावनी दिएका छन् । विदेशमन्त्री रिले शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा गरेको सम्बोधनको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले यस्तै गतिविधिलाई निरन्तरता दिए उनीहरू दुईलाई बाँकी नराख्ने धम्की दिएका हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
भारत आतंकवादको जननी : पाकिस्तान
एजेन्सी, आश्विन ९, २०७४
पाकिस्तानले भारत ‘दक्षिण एसियाको आतंकवादको जननी’ भएको आरोप लगाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको आरोपको जवाफ दिँदै राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानी स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधीले भारतमाथि उक्त आरोप लगाएकी हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
आन्दोलन १०० दिनमा : गोर्खाल्यान्डप्रति भारतीय सरकारको बेवास्ता
जीटीए पुनर्गठनको विरोध गर्दै दार्जिलिङमा निकालिएको जुलुस ।तस्बिर : कान्तिपुर
पश्चिम बंगालको पर्यटकीय सहर दार्जिलिङमा अलग प्रान्त ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग गर्दै गरिएको आन्दोलनले सय दिन नाघेको छ । यो अवधिमा आन्दोलनले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । मुख्य माग गोर्खाल्यान्डप्रति राज्य र केन्द्र सरकार दुवै मौन देखिएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मेक्सिकोमा फेरि भूकम्प
सीएनएन/सिन्हवा, आश्विन ७, २०७४
गत मंगलबार गएको शक्तिशाली भूकम्पको उद्धारकार्य नसकिंदै मेक्सिकोमा शनिबार फेरी भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भूगर्भ संस्था युएसजीएसका अनुसार ओकासा राज्यको दक्षिणी क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.२ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
ट्रम्पको भाषण कुकुर भुकाइ : उत्तर कोरिया
बीबीसी, आश्विन ६, २०७४
उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसंघमा दिएको भाषण ‘कुकुरको भुकाइ’ भएको जनाएको छ । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालय परिसरमा संवाददतासँग उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री री योङ होले ‘कुकुरको भुकाइले कुनै अर्थ नराख्ने’ को संज्ञा दिए । पूरा पढ्नुहोस्
बीबीसी, आश्विन ५, २०७४
म्यान्मारबाट विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थीलाई सहायता पुर्‍याउन गएको रेडक्रसको ट्रक दुर्घटना हुँदा ९ जना सहायताकर्मीको ज्यान गएको छ । बंगलादेशको कोक्स बजारबाट सहयाता सामाग्री बोकेर शरणार्थी शिविरतर्फ गएको ट्रक दुर्घटनामा परेको हो । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा केही घाइते भएका छन् । ट्रकमा सबैजसो सामाग्री वितरणका लागि लगिएका मजदुर थिए । पूरा पढ्नुहोस्
ब्रेक्जिटले विभाजित बेलायतको राजनीति
नवीन पोखरेल, आश्विन ४, २०७४
आफ्नो पार्टीमा बढो युरोप विरोधी आवाज निरुत्साहित पार्न बिना सुझबुझ गरिएको जनमतसंग्रहमा बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने पक्षको जितले बेलायती राजनीति विभाजित हुने क्रम जारी छ । ईयू पक्षधरले जनमतसंग्रहमा जित्लान् र बेलायतले यति चांडै ईयू छोड्नुपर्ला भन्ने हेक्का त्यस बेला सरकारले राखेको थिएन । पूरा पढ्नुहोस्
नेपालभाषा संगीत क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएका संगीतकार विष्णु जल्मीलाई यस वर्षको पेजथ्री लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ । पेजथ्री नेपालभाषा पिपल्स च्वाइस अवार्डको तेश्रो संस्करणमा ३३ विधाका उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
सुनीललाई मेलोडी राजेशको दोस्रो ‘व्यक्तित्व र काव्यमा चिरयौवनाको गुण’ ‘भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र विकृत’
प्रत्येक वडामा एक वर्षभित्र इन्टरनेट पुर्‍याउन संसदीय समितिको निर्देशन
सुशील दर्नाल/रासस, आश्विन ९, २०७४
व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिले एक वर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
कस्तो स्मार्टफोन चाहियो ?सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ बजारमामोबाइलबाट १३० च्यानल हेर्न सकिने जागिर खोज्न सरकारी वेबसाइट
‘नेपालमा केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने मानसिकता बनाउँदै आउनुभएको छ भने एकपटक धोबीघाटस्थित अगेनो – द हेस्टियामा जानुहोस् । यो रेस्टुरेन्टले आममानिसका यस्तै धारणालाई ब्रेक गर्न मद्दत गर्नेछ । पूरा पढ्नुहोस्
महागुरु फाल्गुनन्द समाज सुधार, शान्ति र एकताका एक प्रतीक हुन् । तत्कालीन समाजमा व्याप्त विकृत संस्कार र परम्परा सुधार्न महान् अभियान थाल्ने सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा उनी स्थापित छन् । पूरा पढ्नुहोस्
जागरणकी अभियन्ता- याेगमायाअनुगमन गर्दा मन्त्रीको गाडी तोडफोड नेपाली ‘राष्ट्र’ का निर्माता विद्रोहका संवाहक
जुम्ल्याहा बच्चाका फरक-फरक पिता !
कुनै पनि बच्चाको बाबु कुनै एक पुरुष हो या होइन भनेर जान्न चाहे त्यसको सिधा उत्तर पाउन सकिन्छ । तर अमेरिकाको न्यू जर्सीस्थित अदालतमा एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चाको स्याहरसुसारका लागि एक पुरुषलाई उनीहरुको बाबु भनेर दायर गरेको मुद्दा भने केही पेचिलो भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
लामखुट्टे मारेपछि एक जापानी ट्वीटरमा प्रतिबन्धितचार महिने बालिकाद्वारा पुस्तक विमोचन !रेडपान्डा जोगाउन कुकुरको बन्ध्याकरणएलजीको टीभीले लामखुट्टे भगाउने !
नेपाली कागजको चंगा (तस्बिरहरु)
तस्बिर : इलिट जोशी, आश्विन ८, २०७४
दसैंको रोनक भनेको चंगा पनि हो । बर्खा सकिएर सफा भएको निलो आकाशमा रंगिचंगी चंगा देखेर कसलाई राम्रो लाग्दैन होला र ? भदौ महिना लागेदेखि नै बजारमा विभिन्न प्रकारका चंगाहरुको विक्री बढ्छ । केही सयम यता नेपाली कागजले बनाएको चंगा पनि खुब विक्री हुन थालेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
राउटे बस्तीमा पनि भित्रियो दसैं [फोटोफिचर]
ज्योती कटुवाल, आश्विन ८, २०७४
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटेहरु यसपालिको दसैं रमाइलो गरी मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । सदाभन्दा यसपालिको दसै राउटेको लागि खास हुने भएको छ । गृहमन्त्रालयको सहयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यलय दैलेखको स्वामित्वमा उनीहरुले खाद्यान्न पाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
दसैं खर्चका लागि धमाधम ठेकी
विमल खतिवडा, आश्विन ६, २०७४
चितवनको विकट इच्छाकामना गाउँपालिका-१ स्थित जाइथलीका स्थानीयलाई अहिले दसैं खर्च जुटाउन ठेकी बनाउने चटारो छ । नजिकिएको चाड दसैंलाई लक्षित गर्दै ठेकी बनाउने गरिएको छ । यसरी बनाएको ठेकीलाई बिक्री गर्न सदरमुकामसँगै स्याङजा, बागलुङ र पर्वतसम्म पुर्‍याउने गरिएको छ । ठेकीको साइज अनुसार मूल्य राख्ने गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
यसरी मनाइयो राजधानीमा संविधान दिवस (फोटो फिचर)
नेपालको संविधान घोषणा भएको तेस्रो वार्षिक दिवसका उपलक्ष्यमा नेपाली सैनिक मञ्चमा संविधान दिवस–२०७४ समारोह आयोजना गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
जिल्ला संवाददाताहरू, आश्विन २, २०७४
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि भएको निर्वाचनअन्तर्गत आज बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान जारी छ । पूरा पढ्नुहोस्
मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याई [फोटोफिचर]
मनोज पौडेल, आश्विन १, २०७४
हिन्दु धर्मावलम्बीको पर्व दसैंतिहार जतिजति नजिकिँदै जान्छ । त्यति नै कपिलवस्तु नगरपालिका १ का कृष्णदयाल ठाकुरको व्यस्तता बढ्दै जान्छ । रातदिन उनी विभिन्न देवीदेवताका मूर्ति बनाउने काममा खटिन्छन् । अहिले नगरपालिकाको व्यस्त चोकमा पालले ढाकेर मूर्ति बनाइरहेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
शब्द/तस्बिर : सुरविन्द्रकुमार पुन, भाद्र ३१, २०७४
वर्षको कम्ती पनि साता दिन लेकाली खर्कमा नबिताउँदा मलाई के–के नपुगेजस्तो लाग्छ । फिक्कापन महसुस गर्छु । कुनै न कुनै फुर्सदको मौका पारी खर्कहरू घुम्ने मेरो उत्कट रहर पछिल्ला वर्षहरूमा झन् चुलिँदो छ । पूरा पढ्नुहोस्
लक्ष्मी साह, भाद्र ३०, २०७४
असोज २ गते हुने चुनावको लागि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल देखिएको छ । व्यवस्थापन गर्न धौंधौं परिरहेको छ । २ उपमहानगर, पाँच नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा १ सय ६७ वडामा ४ सय ५८ मतदान केन्द्रको लागि झन्डै तीन हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
नेपालका ती ‘माक्र्स’ साहित्यमा त्यो हस्तक्षेपसांगीतिक सेतुइतिहासका विपरीत धार
क्रिएटिभ मेकअपफिफा १८ को प्रतीक्षा टप अन द चार्ट्सदसैंलाई बुक्स
चंगा चरीज्याकबिनिम्बल ब्याक मेरो दसैं रमाइलो दसैं